Omenala na ọdịnala nke obodo Portuguese | Njem zuru oke
Omenala na odinala obodo Portuguese
N'ime ihe karịrị afọ 800 nke akụkọ ntolite, Portugal bụ otu n’ime mba ndị kacha ochie n’ụwa. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, e guzobere ọdịnala na ọdịbendị Portuguese dị iche iche, nke taa na-akọwa obodo ha na obodo ha n'ọtụtụ ebe dị iche iche.
Nke gastronomy site na mmanya, nka na nka egwu, las ememme ndị a na-ewu ewu na njem ala nsọ, e nwere ọtụtụ ihe mere ileta ọmarịcha obodo a.
3 Ememme ndị a ma ama na njem ala nsọ
4 Arts na nka
Portugal bụ ogologo oge mba nwere nnukwu nri nri. Otu n’ime nri izizi pụtara ìhè na Portuguese gastronomic ahụ bụ cod.
Koodu bu ihe ngwọta nye nsogbu ndi mmadu inweta ohuru azu, dị ka azụ a na-adị ogologo oge mgbe echekwara ya na nnu. Dị ka akụkụ nke ndị bi na enweghị ego iji zụta azụ ọhụrụ, ndị cod malitere ibu kpakpando nke Portuguese gastronomy ma, taa, bu otu n'ime nri ya kachasi nma.
N'ikwu eziokwu, e nwere otu puku ụzọ esi esi nri cod: cod achicha, ude, na anụ a ,ara n'ọkụ, na achịcha ọka, wdg, ha niile bụkwa akụkụ nke ọdịnala gastronomic Portuguese. Karịsịa, na ọ na-esonyere a ezigbo ọdụ ụgbọ mmiri mmanya. A na-emepụta mmanya a na ugbo dị na Douro mpaghara mmanya (mpaghara mmanya mbụ a ga-amata n'ụwa) ma chekwaa na wineries, na Vila nova de gaia.
Ejiri egwu gosiputa omenaala ndi Portuguese. Otu n'ime njirimara egwu egwu na Portugal, yana pụrụ iche n'ụwa niile, bụ fado.
Musicaldị egwu a malitere iguzo na Portugal na nkera nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX, ma ọ bụ naanị n’ime afọ 30 na 40 nke narị afọ sochirinụ ka ọ nwetara amụma, site na mgbasa dịka sinima, ihe nkiri na redio.
E nwere ọtụtụ akụkụ nke na-egosi ụdị egwu a dị ka melancholy, agụụ na akara aka; banyere onye na-abụ fado, onye nwere ụzọ pụrụ iche nke eji ejiji na abụ abụ dịka onye ọzọ na-abụ abụ nke ụdị ndị ọzọ. Okwesiri ighota na UNESCO weere fado dika ihe nketa a na-achoghi achota.
Mana ọ bụghị naanị fado bi egwu egwu Portuguese. Uzo ozo di egwu nke mba a bu egwu ama ama.r, dị ugbu a n'ọtụtụ ememme na Portugal - ụdị ndị kachasị ewu ewu bụ Balinho na Madeira, Malhao ma gbanye.
Ememme ndị a ma ama na njem ala nsọ
Ememme ndị a na-eme na ememme ndị ọzọ bụ akụkụ ndị ọzọ dị ugbu a na ọdịnala Portuguese wee bịa na aka ụfọdụ mpaghara ndị a kpọtụrụ aha n’elu, dịka gastronomy na egwu.
Akụkụ dị ka Santo Antonio, San Pedro na São João na njem uka nke ebe nsọ nke Nwanyị anyị nke Fatima, n'etiti ndị ọzọ, ọtụtụ nde ndị njem mba na ndị si mba ọzọ na-agagharị n'okporo ámá nke obodo ukwu na obodo nta ndị dị na Portugal, otu ma ọ bụ na nraranye, na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọdịnala Portuguese.
na Ndị otu San Antonio, na Lisbon, ha bụ ememme izizi kasịnụ na mba ahụ; A na-eme ha n’ime izu nke June 13, a na-eji basil chọọ ụlọ mma, sardines achicha na achịcha ọka, ebe ọ bụ na a na-ewere ya dị ka onye nsọ nke alụmdi na nwunye, a na-anwa ịme ọtụtụ agbamakwụkwọ n’oge ememme ndị a.
Como Saint Anthony si Lisbon, nakwa na Porto na Braga dị na São João na-eme ka ọtụtụ puku mmadụ na-enwe obi ụtọ, na-abụ ebe kachasị elu n'abalị site na 23 ruo 24 June; otu nnọkọ agbatịpụrụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ma mara nke ọma dị ka "Abalị San Juan", nke a na-agbanye ọkụ ọkụ iji chụpụ mgbaàmà ọjọọ.
Ọzọkwa njem ala nsọ nke Virgin nke Fatima ha na-akpali ọtụtụ ndị ma bụrụ akụkụ nke ọdịnala Portuguese. Datesbọchị ndị bụ isi bụ, na-enweghị mgbagha, May 13, ụbọchị a na-eme mmemme ngosi mbụ nke Virgin maka ndị ọzụzụ atụrụ atọ, n'obodo Fátima na 1917. otherbọchị ọzọ dị mkpa bụ October 13, nke na-eme ọhụụ ikpeazụ nke Nwanyị Na-amaghị Nwoke.
Arts na nka
Mpaghara ọzọ nke pụtaworo na ọdịbendị Portuguese n'oge oge bụ nka na nka. Karịsịa Kemgbe narị afọ nke 17, nkà na ọrụ malitere ịmalite mkpa mba, nwere ezigbo mkpa na mpaghara dịka seramiiki, akwa akwa, ịcha mma, ọla, na ndị ọzọ.
La Omenala Portuguese na tapestry mere na narị afọ 18 ma jiri ya kemgbe ahụ maka mgbidi na mgbidi. Isiokwu ndị dị ka ọrụ ndị Portuguese, okpukpe na ndị ọzọ na-egosi na akwa ahụ. Na mba na mba ozo, ndị kasị mma-mara rugs bụ doro anya na kapeeti Arraiolos, nke bilitere na Alentejo, n'obodo Arraiolos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Omenala na odinala obodo Portuguese
ozi ị na-enye dị ezigbo mma
Enweghị m mmasị na ya n'ihi na ọ nweghị ihe ọ bụla, nwee mwute mana ọ naghị efe m
Zaghachi ka azu
Orribl a enweghị isi na peeji a. Ọ bụrụ n’itinyeghị ihe ga - abara anyị uru karịa, ebipụtala ihe ọ bụla
Zaghachi nye uxa
ire ere kwuru vweno na m achọ ịma nkọcha ATT KRIAS
Zaghachi ka ị kwaga
VAMONOZ A SORIANO ATTE EL KRIAZ NA PINCHES PERROZ PUDRANZE DAMN PUÑALEZ
Ihe m choro aputaghi ebe m nwere omenaala na Portugal ma i tinye m ndi njem nleta ... Achọghi m ya.
Ọ dị nwute ma ọ bụghị ihe m chọrọ
Ama nke ị nyere m daalụ nke ọma, ume paraguay c ………… ..
ỌMA M NA-AD HTA PAGE NA ỌMA D I MKA Ọ B IT NA M GA-ENWE Ohere IJU TOGBA PORTUGUESE
Obodo ndị Canada nwere ihu igwe kachasị mma
Obodo iri mara mma na Morocco